Best Dental Irrigators | Ndeipi yekutenga? Maonero, Mitengo uye Kuenzanisa
oral b mvura jet
Waterpik WP 300 Mufambi
Philips Sonicare Hutano Muchena
Iwe unoda kuwana iwo akanakisa mhedzisiro muDental Hutsanana? Kanganwa zvemazuva ese kukwesha kana kupuruzira wotanga kushandisa Dental Irrigator. Iwo anoshanda, akachengeteka, ari nyore kushandisa uye anogona kukuchengetedza kushanya kwakawanda kuna chiremba wemazino.
Pano iwe unowana ruzivo rwakakwana uye rusina rusaruro pane zvekudiridza nemuromo: Kuenzanisa, kuongorora, maonero uye mitengo yemhando dzakanakisa uye mhando kuitira kuti iwe ugone kusarudza iyo inonyatsoenderana nezvido zvako uye bhajeti. Usarasikirwa neruzivo uye uwane kunyemwerera kwako kwakanyanya!
Yakanakisa Oral Irrigators Kuenzanisa
Enzanisa akanyanya kukosha maficha eakanakisa desktops kana tambo dzisina tambo pakungotarisa nematafura maviri aya.
Yakanakisa Tabletop Irrigators Kuenzanisa
Best Travel Irrigators Kuenzanisa
Nhamba 1 muKutengesa
Dental Irrigators Kuenzanisa
Chii chinonzi Oral Irrigator?
Ndeipi Dental Irrigator yekutenga?
Chii Chakanakisisa Dental Irrigator?
Parizvino pane mazana emamodheru pamusika, asi aya ndiwo 10 yakanakisisa yekudiridza nemuromo (desktop uye laptop) uye zvinofarirwa nevashandisi veSpanish:
Waterpik WP-100 - Chigadzirwa che ...
10 Kudzvinyirira Matanho kusvika ku100 Psi
7 Misoro Inosanganisirwa
Yakananga Mouthpieces Implants, Orthodontics, nezvimwe ..
360 dhigirii inotenderera muromo
Kunyangwe isiri iyo kambani yepamusoro-ye-iyo-yemhando modhi, iyo WP-100 ndiyo irrigator yemazino inotengeswa zvakanyanya munyika yedu kwemakore.
Iyi hydropulsor ndeyepasirese inotungamira mhando muhutsanana hwemukanwa zvakanyanya zvinokurudzirwa navanachiremba vemazino, ine chisimbiso che ADA (American Dental Association) uye kushanda kwayo kwave kuri zvakasimbiswa nesainzi.
Zvaunosarudza zvinosangana zvinodiwa nemushandisi chero upi zvake, kunyanya sezvo ichisanganisira nozzles kune zvese zvinodiwa.
Waterpik WP 100 Analysis
Waterpik Ultra Mvura Irrigator ...
Kuchenesa uye gum massage basa
El WP-660 ikurudziro yedu kune vari kutsvaga chekudiridza yemhando uye yakakwana kwazvo nemutengo wakagadziriswa. Iri mumutengo wepakati, inobva kune inotungamira mhando uye mataurirwo ayo uye michina yakanakira chero mushandisi.
Iyi hydropulsor ine mazinga emagetsi akasiyana, ma nozzles emarudzi ese ezvido uye matekinoroji akanakisa ekambani ane patent yakawanda pamusika.
Waterpik WP 660 Analysis
5 Kudzvinyirira Matanho kusvika ku51 Psi
4 Misoro Inosanganisirwa
Wall kana Tafura Mount
Kutongwa kwemazuva makumi matatu
Braun akavaka mukurumbira wakanaka munyika yehutsanana hwemeno uye madiridziro avo ariwo pakati pezvakanakisa pamusika.
El Oxyjet na braun mutengesi akanakisa anomira kunze kwekuve nekuchenesa sisitimu iyo inosanganisa jeti yemvura yakamanikidzwa nemhepo yakanatswa, izvo zvinoita kuti timu a sarudzo yakanaka kune vanhu vane huturu hwemagums.
Kazhinji, chinhu chakakwana kwazvo uye vashandisi vanogutsikana nemhedzisiro yainopa. Zvakakodzera kutaura izvozvo iyo yakanyanya kudzvinyirira yakaderera pane yakawanda midziyo, asi kubva kuOral B vakatizivisa kuti zvinofanirwa kuenderana nezvidzidzo zvavo.
Oral B Oxyjet Analysis
Aquapik 100 - Dental irrigator ...
10 Kudzvinyirira Matanho kusvika ku130 Psi
Makore maviri garandi
Kana uine bhajeti rakasimba, haufanirwe kusiya yakanaka yekudiridza nemuromo sezvo pane zvakawanda zvingasarudzwa pamusika izvo mitengo yavo iri mukati mekusvika kwese mabhajeti. Tinoda kuratidza iyi modhi yavainayo zvakanaka chaizvo mushandisi mareferensi vakazviedza uye zvinopa chii Makore maviri garandi.
Iyo Aquapik kubva kuOralteck Usa brand iri ADA Certified, ine zvirevo zvakanakisa, iyo yakanyanya kukwana midziyo uye a mutengo wakagadziridzwa chaizvo maererano nemakwikwi.
Aquapik 100 Analysis
Pro-HC Mvura System
Irigator yemuromo kana yemazino ...
5 Kudzvinyirira Matanho kusvika ku75 Psi
11 Misoro Inosanganisirwa
Imwe yehupfumi hydropropeller iyo inomira pamusoro peimwe mudziyo weiyo brand Pro-HC, kunyanya iyo WATER SYSTEM PREMIUM, kuti takaongororawo pawebhusaiti yedu.
Icho chigadzirwa icho Iyo inomira pamusoro pezvese muhuwandu hwemisoro inosanganisirwa uye mune yayo yekutanga asi inoshanda uye nyore kushanda. Pamusoro pekuvandudza hutsanana hwemukanwa, ine misoro miviri ye kudiridza nasal.
Mvura System Premium Analysis
Waterpik 450- Oral Irrigator ...
2 Kudzvinyirira Matanho kusvika ku75 Psi
Pasinei nemutengo wayo wepamusoro-avhareji, iyo Wp-450 Ndiyo imwe yeanonyanya kutengesa inotakurika hydropulsors munyika yedu. Izvo zvizere zvinotsanangurwa uye ruzivo rwechiratidzo chinoita kuti ive yakachengeteka kubheja.
Inomira pamusoro peavhareji mu zviri nani zvemhando yezvishandiso, hukuru hukuru hwetangi, kuzvitonga kwakawanda kwebhatiri uye mune izvo zvinosanganisira akakosha nozzles zvema implants uye zve orthodontics.
Waterpik 450 kuongorora
Kudzvanya kusvika ku85 Psi uye 1400 pulses paminiti
3 modes (MHEPO MUNORMAL, AIR IN SOFT, JET)
2 Misoro Inosanganisirwa
yakanakisisa Panasonic irrigators Ndiwo mabhatiri emhando uye iyi isina cordless oral irrigator ndeye imwe yemidziyo ine yakanakisa mhando mutengo pamusika. Izvi zvakaimisa se mumwe wevanotengesa zvakanyanya munyika yedu, pamusoro kunyange waterpik.
Icho chinhu chine simba rakanaka uye matatu ekushandisa modes kune yakanaka kwazvo mhedzisiro mumuromo utsanana. Izvo chete zvisingabatsiri zvichienzaniswa nemamwe mamodheru ndiyo yakaderera tangi, iyo inoda kuti izadziswe kakawanda.
See more Panasonic dental irrigators
Waterpik WP-300 Mufambi
TENGA MVURA - MVURA PICK WP300 ...
3 Kudzvinyirira Matanho kusvika ku80 Psi
450 ml reservoir kwemasekonzi makumi matanhatu
Sezvinoratidzwa nezita racho, iyo WP 300 muenzaniso we desktop ine dhizaini uye maficha anoita kuti zvive nyore kuitora chero kwatinofamba.
Nokuda kwaizvozvi zvavanazvo yakaderedza saizi yayo uye vakazvigadzira nenzira yakadaro inogona kuchengetwa mubhegi diki rekufamba rinosanganisirwa.
Izvo zvakare iine kuenderana negetsi remagetsi renyika dzakasiyana siyana, zvichiita kuti ive yakanaka inotakurika imwe nzira yemhando dzebhatiri.
Oral-B 2 mu1
Oral-B PRO 3000 - Chiteshi ...
Kana zvakadaro 2-in-1 oral irrigators ine irrigator uye brashi mazino mutungamiriri asina kupokana iyi brand hydropulsor Oral-B. Muchikamu chimwe chete tine a kutungamirira brand yemagetsi mazino uye hydropulsor kuita kudiridza nemuromo mushure mekukwesha kwega kwega.
Isu hatidiwo kukanganwa imwe 2-in-1 modhi yatakaongorora, iyo Waterpik WP900. Kunyangwe isiri kufarirwa nevashandisi, inogadzirwa nekambani ine madiridziro emazino akanakisa pamusika.
Kana iwe usati uine bhurashi remazino remagetsi, ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kuwana hutsanana hwemazino hwakakwana kumba.
Sowash: Faucet Irrigator isina Motor
SOWASH Dental Irrigator...
Unoda isiri-motorized booster isingaite ruzha uye isingapedze magetsi? Iyo Sowash ine angangoita zana maonero uye avhareji chiyero che 4.2 pamusoro pe5 nevashandisi vakazvitenga.
Mutengo waro wakaderera pane mamwe mamodheru akabatana nepombi uye pamusoro payo yevanotengesa zvakanyanya uye inokosheswa zvakanyanya.
Iye zvino kune mazana emhando dzemhando dzakasiyana neakasiyana mataurirwo, magadzirirwo uye mitengo. Izvi zvinoita kuti zviome kusarudza yakanaka yekudiridza yemuromo kune imwe neimwe.
Chinhu chinonyanya kukosha mu hydropulsor ndechekuti inoshanda mukubviswa kwebhakitiriya uye tsvina yezvokudya inogona kuramba iri mumuromo wemuromo mushure mekukwesha.
Kutanga kubva pachigadziko ichi, pane zvimwe zvakakosha zvakatemwa, senge magadzirirwo ekumanikidza kana kugona kwetangi, uye zvimwe zvisina basa senge dhizaini kana ruzha.
Nhungamiro Yekusarudza Yakanakisa Dirita Yemuromo
Izvi ndizvo Hunhu hunokosha hwekufunga nezvahwo kukusarudzira yekudiridza yakakunakira:
Pakutanga, inonyanya kuzivikanwa ndeyekusarudza muenzaniso wedesktop nepombi yemagetsi, asi kune vanhu vanoda a Inotakurika mazino irrigator kuitora panzendo dzako kana kunyange imwe isina injini.
Kudzvinyirira uye Dental Shower Modes
Imwe yemhando huru iyo inotipa kuchenesa kwakaringana ndeye simba uye kunaka kwejeti remvura. Kurudziro yedu ndeyekusarudza mhando dzine simba repamusoro-soro asi dzinogara dzichichinjika, kuti tikwanise kuigadzirisa kune zvatinoda. Simba repamusoro asi risingadzorwi rinogona kutsamwisa vamwe vanhu.
Kunze kwemasimba akasiyana, zvakare kune majeti emvura akasiyana nemidziyo ine mukana wekusarudza nzira dzakasiyana dzekushandisa. Kune jets ne mamwe mabhiti paminiti, jeti dzinoenda yakasanganiswa nemhepo inoputika uye kunyange squirt massage mode.
Pane mamwe mamodheru saizi yetangi Izvo hazvina kukwana kucheneswa kwakakwana, saka uchafanirwa kuizadza zvakare imwe nguva mukati mayo. Izvi pakutanga zvinoita sezvisina kukosha asi nekufamba kwenguva zvinogona kushungurudza, kunyanya kana iri diki uye iwe unofanirwa kuzadza kakawanda pakushandisa.
Pamusoro pezvakajairwa miromo yemazino emazino ane hutano, pane zvekushandisa pamuromo zvevashandisi vanoshandisa orthodontics kana vane mazino anoiswa. Kana tichida kuwana mibairo yakanaka, tinokupa zano kuti uzvifungire kana uchikusarudzira madiridziro akakunakira.
Izvo zvakakoshawo kutaura kuti kune mamodheru ane fixed nozzles uye ane Muromo unotenderera uye unobvumira kupinda nyore kunzvimbo dzese dzemuromo.
Kuwanikwa kweSpare Zvikamu uye / kana Zvishandiso
Usati wasarudza hydropulsor unofanirwa kuve nechokwadi kuti at least mareplacement nozzles aripo kuti uchada. Aya mapundu ane hupenyu hunobatsira hwemwedzi mishoma uye zvakakosha kuzvitsiva, kunge bhurasho remazino.
Kutenga modhi kubva kune anozivikanwa mabhureki kunovimbisa kuti masipari achave inowanikwa kwenguva yakareba.
Noise Level uye Dhizaini
Kunyangwe iwo maitiro ayo usapesvedzera zvakananga kuita Pakati pekudiridza nemuromo, kune vanhu vanoisa zvakanyanya kukosha pamativi ese ari maviri. Ruzha harudzivisike pamadiridziro ane simba, asi ichokwadi kuti mamwe magajeti ane moyo kupfuura mamwe. Kana izvo zvaunoda zviri kunyarara zvachose panguva yekudiridza nemuromo iwe uchafanirwa kusarudza imwe yemhando isina mota dzakabairirwa papombi.
Izvo zvakasiyana-siyana zvekugadzira zvakakura, kukwanisa kusarudza mavara akasiyana uyewo hukuru hwakasiyana. Kune kunyange mamwe ma compact benchtop thrusters akagadzirirwa kufamba, senge waterpik wp-300 mufambi. Mimwe midziyo inogona kusungirirwa pamadziro, chimwe chinhu chinogona kufarirwa munzvimbo diki.
Dental Irrigators Mutengo uye Warranty
Kubudirira kwevanodiridza uye kugutsikana kwakawanda kwevashandisi kwakareva kuti mumakore achangopfuura kudiwa kwakawedzera. Sezvo kudiwa kunowedzera, vagadziri vatsva vasingaverengeki vakaonekwa vakatanga kupinda mumusika makopi zvemhando yepamusoro. Aya marangi havana ruzivo kana vimbiso kushanda zvakanaka kwakadai seWaterpik, inotsigirwa neADA uye yanga ichigadzira uye nekupa hunyanzvi hwayo matekinoroji kweanopfuura makore makumi matatu.
Zviri pachena kuti havasi vose vanogona kutenga mhando dzakanakisisa pamusika, asi uswa Cheap Dental Irrigators izvo zvinopa mhedzisiro yakanaka kwazvo. Pawebhusaiti yedu unogona kuwana anopfuura imwe ine yakanaka mhando uye yakanaka kwazvo mushandisi maonero.
Maonero evamwe vashandisi vakaedza kudiridza nemuromo ireferensi yakanaka yekuziva kuti ndezvipi zvazvinopa. Wese munhu akasiyana, asi hydropulsor ine akawanda ratings uye inowana yakakwira avhareji mamaki haigone kutiodza moyo.
Ona maIrrigators eOral akanakisa
Best Brands of Oral Irrigators
Imwe nhanho pamusoro pezvese ndeye Waterpik, mutungamiri wenyika mumadiridziro emazino ane akawanda ematendi uye zvidzidzo zvesainzi izvo zvinotsigira zvigadzirwa zvavo. Kunyangwe iri imwe yevanotengesa zvakanyanya, haisiriyo yega ine yakanaka booster.
Dzvanya pavari kuti uwane ruzivo rwese nezve ma brand ane mukurumbira uye iwo emhando yepamusoro:
[su_row] [su_column size = »1/2 ″ pakati =» kwete »kirasi =»»]
Chii chinonzi Dental Irrigator?
Diridzi remuromo kana shawa yemazino chingori mudziyo unoshandisa a pulsating jet yemvura yakamanikidzwa kubvisa tsvina yezvokudya uye bhakitiriya plaque , que vanoramba kukwesha zuva nezuva.
Iyi nzira inozivikanwa se kudiridza nemuromo uye kuwana kusvika kunzvimbo dzakaoma yemukanwa, senge nzvimbo dzepakati pemazino, gum line kana homwe yeperiodontal.
Mashandisiro eDental Irrigator
Madiridziro ese ane masisitimu akafanana uye anoumbwa nea tangi remvura, pombi uye nozzle kupi kushandisa pressure jet.
Mamwe mamodheru anosanganisira kuvandudzwa kwakadai se akasiyana nozzles, akasiyana anochinjika mazinga ekumanikidza, uye kunyange masaja kana mazino chena sarudzo. Pakati pemanozzles akasiyana tinogona kuwana chaiwo iwo orthodontics, for anodyara uye kunyange mitauro.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa Pamusoro peOral Irrigator
Kusahadzika kwakajairika nezve hydropulsors
Ndeipi nguva yakakodzera kushandisa hydropulsor?
Vakakodzera chero munhu vanotsvaka kuwana hutsanana hwemazino huri nani mudzimba dzavo, nokudaro vachibatsira kudzivirira zvirwere zvemukanwa. Haufanire kuve nedambudziko kuti uzvishandise, uye kune kunyange mienzaniso yevana, asi Inofanira kushandiswa nguva dzose mumamiriro ezvinhu aya:
Varwere vane simbi dzinoita kuti kuchenesa kunetse
Dental implant varwere
Varwere vane gingivitis kana periodintitis
Irigator remuromo rinoshandiswa kangani pazuva?
Inogona kushandiswa mushure mekugeza mazino ese, chero bedzi isingasviki maminitsi mashanu maawa maviri oga oga
Mvura Yepombi Inoshanda Here?
Madiridziro shanda nemvura yepombi yakajairika, hazvidikanwi kushandisa mineral water kana kushandisa chero zvinowedzera.
Vanhu vakawanda vanogona kuishandisa here?
ari ma nozzles anochinjika uye anowanzo kuuya nemavara akasiyana, saka imwe hydro-propellant inogona kushandiswa nenhengo dzakasiyana dzemhuri.
Inogona kushandiswa neMouthwash?
Kunyange zvazvo zvisingadiwi, mouthwash inogona kuwedzerwa muchiyero chepamusoro che1: 1. Hazvikurudzirwi kushandisa zvimwe zvinowedzera zvakadai sebicarbonate kana chlorine.
Mhando dzeOral Irrigators
Iye zvino tinogona kutenga mhando nhatu yemidziyo yekudiridza nemuromo:
Tabletop Irrigator: Iwe unofanirwa kuabatanidza mumagetsi emagetsi uye ndiwo anonyanya kuwanda. Sezvo mutemo wakazara, ndivo avo vanopa kuita zvirinani, mamwe modhi dzekushandisa uye nhamba yenozzles. Vanogona kuva mienzaniso nyore kana maviri-in-one madiridziro, iyo inosanganisirawo bhurasho remazino remagetsi.
Portable Irrigators: Iwo mawire modhi ayo batanidza bhatiri rinochajwa. Midziyo iyi ndiyo yakanakisa sarudzo kana iwe uchida kuibvisa kubva kumba kana uine nzvimbo shoma muimba yako yekugezera.
Faucet mazino irrigator isina mota: Iyi mhando yemidziyo ivo vashoma vanotengeswa. asi vane zvimwe zvakanakira. Enough with vabatanidza zvakananga kune pombi uye sezvo vasina mota, havadi simba uye havaiti ruzha.
Ndekupi Kunotenga Diriga reOral?
Kunyangwe ukasarudza iyi modhi kana chero imwe Kurudziro yedu ndeyekutenga online muAmazon. Ivo Mhando dzakawanda, mitengo yakanakisa yepamhepo, yakachipa uye nekukurumidza kutumira uye iwe unogona zvakare kudzorera kutenga kwako pasina matambudziko. Tave nemakore tichishanda navo uye hatina kumbova nedambudziko.
Madiridziro eOral Anotengesa Zvakanakisa
Takakuudza kuti ndeapi mamodheru akanakisa pamusika, asi zvigadzirwa izvi hazviwanzo pindirana nevanotengesa zvakanyanya. Pazasi unogona kuona a list inovandudzwa otomatiki neinodiridza yemazino inotengeswa zvakanyanya panguva ino:
Oral-B Oxyjet Dental Irrigator... Ona maficha 21.017 Ongororo View deal
Inotakurika Oral Irrigator ... Ona maficha 11.466 Ongororo View deal
Inotakurika Oral Irrigator ... Ona maficha 5.556 Ongororo View deal
Apiker Dental Irrigator ... Ona maficha 10.990 Ongororo View deal
Oral Dental Irrigator ... Ona maficha 524 Ongororo View deal
TUREWELL Oral Irrigator,... Ona maficha 3.431 Ongororo View deal
Zvakanakisa	Oral-B Oxyjet Dental Irrigator...
Unhu hwemutengo	Inotakurika Oral Irrigator ...
Chatinoda	Inotakurika Oral Irrigator ...
Apiker Dental Irrigator ...
Oral Dental Irrigator ...
TUREWELL Oral Irrigator,...
4 makomendi pa«»
05 / 08 / 2019 pa 00: 50
Ndekupi kwandingatenga iyo magnetic plug yekudiridza yangu waterpik ????
07 / 08 / 2019 pa 09: 03
Mhoro Maria. Iwe hautaure modhi yaunayo kuti ikubatsire. Zvakadaro, pawebhu iwe unokwanisa kuwana iyo data yehunyanzvi sevhisi yemhando yeSpain.
17 / 12 / 2019 pa 11: 14
Chinyorwa chakazara kwazvo !! Vanototaura nezvekudiridza mazino eavo vanobatana nepombi 🙂 (Ndinovada). Ini ndashandisa saka wacha uye chokwadi hunhu huri ... nguva dzose sezvo mvura ichibuda kuburikidza nekubatanidza kune pombi pakati pezvimwe zvinhu. Kune avo vanoda zvekudiridza mazino epombi zvakanyanya, kune mamwe mabhureki ari nani pane So Wash, akadai saKler ..., Ban ...
Kunakidzwa nekudiridza uye usakanganwa kuenda kuna chiremba wemazino nguva nenguva kuti chinhu chimwe hachibvise chimwe 🙂
17 / 12 / 2019 pa 14: 32
Ndatenda zvikuru Ana, tinoedza kugadzira chinangwa uye zvemhando yemukati. Kwaziwai
Inotarisira data: AB Internet